Health – Dainiksamchar
October 12, 2020 admin 4366
October 12, 2020 admin 3740
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूलाई फरक फरक किसिमका खानेकुरा खान मन लाग्छ । कोही महिलालाई अमिलो पिरो खान मन पर्छ त कोही महिलालाई गुलियो । यस्ता चिजहरु खान मन लाग्ने सामान्य कुरा हो । कोही
October 11, 2020 admin 4167
हिन्दु धर्मअनुसार पूजामा यदि कपूरलाई समावेश गरिएन भने पूजा अधुरो हुने मानिएको छ । यसको प्रयोगले घरको नकारात्मक ऊर्जा हटेर जान्छ र साथै स्वास्थ्यको लागि पनि लाभकारी औषधि मानिन्छ । कपूरले हाम्रो जीवनमा कैयौ तरिकाले
October 11, 2020 admin 3656
काठमाडौँ । नेपाली बोलीचालीमा बीरे नुन भनिने कालो नुनलाई घरेलु औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन पूरानै हो । पेट दुख्दा या ग्याष्ट्रिक हुँदा यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसमा आइरन, सल्फ्युरसजस्ता कयौं खनिज पदार्थ
October 8, 2020 admin 1195
कोभिड १९ संक्रमित बिरामीहरुलाई स्वस्थ, पोषिलो र सन्तुलित खानाको आवश्यकता हुन्छ। कोभिड १९ संक्रमितलाई अन्य दीर्घ रोग भए नभएको एकिन गरि आवश्यक पोषण व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता जीवनशैलीसँग सम्बन्धित दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरु
सरकारी निवासमा गुर्जो उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण देशभर‘एक घर एक गुर्जो’को अभियान
October 8, 2020 admin 1396
काठमाडौं । मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने वनस्पति गुर्जोका ९५ हजार बिरुवा एक अभियानकर्मीको सङ्कल्पमा करिब चार महिनाको अवधिमा रोपिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाहानमा प्रमुख कर अधिकृतका रुपमा कार्यरत कमलबहादुर राजलवटले सरकारी
October 8, 2020 admin 1079
काठमाडौँ। एउटा मौसममा स्वास्थ्य एकनासले चलिरहेको हुन्छ। मौसम परिवर्तन हुनेवित्तिकै स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभाव पर्छ। एउटा मौसममा अभ्यस्त भएको शरीरलाई अर्को मौसमसँग अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। यस्तो बेलामा शरीरको इम्युनिटी डिस्व्यालेन्स हुन्छ। जसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा
October 7, 2020 admin 1553
October 7, 2020 admin 977
बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ? जानौं पानी हाम्रो जीवनका लागि अति आवश्यक चीज हो तर के तपाइलाई यो थाहा छ कि दैनिक बिहान बासी मुखमा पानी पिउनाले जो हाम्रो मुखमा एक किसिमको
किसमिस खाने सही तरिका, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
October 7, 2020 admin 823
काठमाडौं : ड्राई फ्रुट्स खान धेरैलाई मन पर्छ । यीमध्ये किसमिस मीठो पनि हुन्छ र यसले तत्कालै ऊर्जा पनि दिन्छ । अंगुर सुकाएर किसमिस बनाइन्छ। किसमिस अनेकौं रंगका हुन्छन् : कालो, हरियो, सुनौलो । यी
LEX 18 agenda conversation: Job club (121778)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113680)
Hello world! (113353)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112112)